အောငျဘာလထေီ Online မှ ရောငျးခနြိုငျရေး နညျးပညာဝနျဆောငျမှုပေးလိုသော ကုမ်ပဏီမြားကိုဖိတျချေါ - Han Nyein Oo
၁။ စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာနအနဖွေငျ့ အောငျဘာလထေီလကျမှတျမြားကို ကံစမျးသူမြား လှယျကူ လငျြမွနျစှာ ဝယျယူကံစမျးနိုငျရနျအတှကျ လကျရှိကငျြ့သုံး
လကျြရှိသော အောငျဘာလထေီလကျမှတျ ရောငျးခသြညျ့စနဈ (Paper Lottery) ဖွငျ့ ရောငျးခခြွငျးအပွငျ Online မှတဈဆငျ့ ရောငျးခခြွငျးကို ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
၄။ အဆိုပါကိစ်စရပျနှငျ့ ပတျသကျ၍ တငျသှငျးရမညျ့ အဆိုပွုလှာ (EOI) ပုံစံနှငျ့ သိရှိလိုသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို ပွနျကွားရေးအဖှဲ့၊ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတျ(၄၆)၊ နပွေညျတျော ဖုနျး ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ Email- ir.officeofthedg.mm @gmail.com သို့
ဆကျသှယျတောငျးခံရယူစုံစမျးမေးမွနျးနိုငျပါကွောငျးနှငျ့ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာန၏ Website https://www.ird. gov.mm တှငျလညျး ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါကွောငျး အသိပေးကွညောအပျပါသညျ။
အောင်ဘာလေထီ Online မှ ရောင်းချနိုင်ရေး နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသော ကုမ္ပဏီများကိုဖိတ်ခေါ်
၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်များကို ကံစမ်းသူများ လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ ဝယ်ယူကံစမ်းနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိကျင့်သုံး
လျက်ရှိသော အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် ရောင်းချသည့်စနစ် (Paper Lottery) ဖြင့် ရောင်းချခြင်းအပြင် Online မှတစ်ဆင့် ရောင်းချခြင်းကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာပိုင်းပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် Service Provider လုပ်ငန်း တစ်ခုကို ရွေးချယ်ငှားရမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြချက် (Expression of Interest – EOI ) အဆိုပြုလွှာများ ပေးပို့ တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၃။ တင်သွင်းရမည့် အဆိုပြုလွှာ (EOI) နှင့်အချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း (Service Provider) များအနေဖြင့် တင်ဒါလက်ခံရေး နှင့်စိစစ်‌ရေးကော်မတီ၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်သို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၊ (၁၄:၀၀ နာရီ) နောက်ဆုံးထား ၍ တင်သွင်းပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ တင်သွင်းရမည့် အဆိုပြုလွှာ (EOI) ပုံစံနှင့် သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များကို ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော် ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ Email- ir.officeofthedg.mm @gmail.com သို့
ဆက်သွယ်တောင်းခံရယူစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website https://www.ird. gov.mm တွင်လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။